विदेशबाट नेपाल फर्कनेले ध्यान दिनुपर्ने ३ कुरा | Nepali Virals
जुलाई 3, 2016 | समाज, हट टपिक्स |0comments
विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्कन लाग्नुभएको छ भने नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गते देखी नेपाल सरकारले गरेको भन्सार सम्बन्धी परिवर्तन बुझेर मात्र झोला कस्नुस्। नत्र काठमाण्डौंमा जहाजबाट उत्रे पछी भन्सारका कर्मचारीको चक्रब्युहमा फस्नुहोला।
तपाईं हामी धेरैलाई थाहा छ काठमाण्डौं विमानस्थलका कर्मचारी, प्रहरी अनि भन्सारका हाकिमहरू कति भ्रष्ट र हरामी छन्। विदेशबाट फर्कनेलाई कसरी दुख दिने, ट्र्यापमा पार्ने र पैसा झार्ने भनेर योजना बनाएका कर्मचारीबाट आफ्नो खुन पसिनाको कमाई जोगाएर घरलैजान चाहनुहुन्छ भने यस्ता कुरामा ध्यान दिनुस पहिले।
साउन देखी सरकारले विदेशबाट काम गरेर फर्किँदा ल्याउन पाइने केही सामानहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने केही सामानहरूको भन्सार शुल्क बढाएको छ। नेपाल सरकार भन्सार विभागले झिटी-गुन्टा मार्फत सुन, मदिरा र समदर भन्सार जस्ता कुरामा विदेशबाट फर्कनेहरूलाई तत्काल ठूलो प्रभाव पर्ने खालको परिवर्तन गरेको छ। जुन साउन १ गतेदेखी लागु हुँदैछ। यस्ता छन् परिवर्तन:
१. सुनचाँदी ल्याउनमा निषेध
अब विदेशबाट फर्कनेले काँचो सुन लिएर आउन पाउने छैन। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा आउँदा कसैले पनि काँचो सुन ल्याउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाईएको छ। सरकारले गहना बाहेक अरू सुन बोक्न प्रतिवन्ध लगाएको छ। यसको मतलब हो विदेशबाट सुनका बिस्कुट किनेर नेपाल ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो किन्ने सोच त्यागिदिनुस। अहिले सम्म विदेशमा छ महिना बसेर फर्कनेले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यो व्यवस्था हटेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार बढीमा ५० ग्राम सुनका गहना मात्र ल्याउन पाइनेछ। झुक्किएर वा थाहा नपाएर काँचो सुन ल्याए विमानस्थलमै जफत हुनेछ।
५० ग्रामसम्म सुनका गहनामा भने भन्सार शुल्क लाग्दैन तर यस्ता गहना पनि ५० ग्राम भन्दा बढी गहना ल्याए भन्सारले जफत गर्नेछ।
अहिले समम विदेशबाट फर्किनेहरूले ४ सय ५० ग्राम सम्म काँचो सुन भन्सार तिरेर भित्र्याउन सक्थे।अब भने ५० ग्राम सुनका गहनाबाहेक कुनै खालका सुन पनि ल्याउन नपाइने भएको छ। चाँदीका गहना पनि ५ सय ग्रामभन्दा बढी ल्याउन पाइने छैन।
३. एक लिटर मदिरा मात्र
विदेशबाट फर्केपछी साथीभाईलाई जम्मा पारेर यसो टुच्च लगाउनुपर्छ भनेर विदेशी मदिरा किनेर नेपाल ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यसलाई क्यान्सिल गर्नुस्। पहिले विदशेबाट आउँदा २ लिटर मदिरा निशुल्क भन्सारमा ल्याउन छुट थियो भने अब एक लिटर मात्र ल्याउन पाइन्छ। त्यसैले नेपाल लैजान भनेर मदिरा किन्दै हुनुहुन्छ भने १ लिटरको बोटल हेरेर मात्र किन्नुहोला।
३. सामानमा ४० प्रतिशत भन्सार
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागी साउन १ देखी लागु गर्न लागेको नयाँ झिटीगुन्टा आदेशले समदर भन्सारको नीतिमा परिवर्तन गरि भन्सारको दर बढाएको छ। पहिले समदरमा भन्सार लगाउँदा सामान अनुसार छुट्टा-छुट्टै भन्सार कर र मुल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था थियो भने अब त्यो एकमुष्ट ४० प्रतिशत भएको छ। विदेशबाट फर्किनेले विमानस्थलबाट भन्सार तिरेर समान ल्याउँदा सामानको बिलमा उल्लेख भएको मूल्यको ४० प्रतिशत अर्थात विदेशमा किन्दा तिरेको मूल्यको ४० प्रतिशत भन्सार नेपालमा तिर्नुपर्छ। यस व्यवस्थाले विदेशमा नेपालमा भन्दा निक्कै सस्तो मुल्यमा पाईने सामान नेपाल लैजानको लागी भने निक्कै महँगो पर्नेछ। यसको मतलब हो ६ महिनासम्म विदेशमा बसेर फर्किएकाहरुले ३२ इञ्च भन्दा बढीको टेलिभिजन, म्यूजिक तथा भिडियो प्लेयर, फ्रिज, वासिङ मेशिन, पङ्खा, रेडियो जस्ता अत्यावस्यक आवस्यकताका सामान र १/१ वटा नेपाल लैजानको लागी ती सामान किन्दा परेको मुल्यको ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ।
१० किलो सम्म खानेकुरा, १५ वटा सम्म लुगाफाटा, जुत्ता, कस्मेटिक लगायतका समान, घरायसी प्रयोजनका मिक्स्चर, जुसर, सिलाइ मेसिन, ग्यासटेबुल, कपडामा लगाउने आइरन, राइस कुकर २/२ वटासम्म ल्याएमा भन्सार तिर्नुपर्छ। विदेशमा गरेको काम नेपालमा गर्ने सोचले पेशासँग जोडिएका उपकरण ल्याउँदा पनि २/२ वटासम्मको ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ।
यी सामानको तिर्नुपर्दैन भन्सार
सरकारको नयाँ झिटीगुन्टा आदेशमा केही कुराहरू भने पुरानै छन्, मतलब तिनमा परिवर्तन भएरको छैन। विदेशबाट ल्यापटप वा कम्प्युटर, ट्यावलेट, घडी, क्यामरा, भिडियो क्यामरा, सेलुलर, मोबाइल फोन र पेन ड्राइभ १/१ वटा ल्याउँदा कुनै भन्सार तिर्नु पर्दैन। यसमा भन्सार छुट पाइने व्यवस्था कायमै छ। त्यसरी नै बच्चा राख्ने पेराम्बुलेटर र ट्राइसाइकल १/१ वटा ल्याउँदा पनि कुनै भन्सार तिर्नुपर्दैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा एक वर्ष बिताएकाले ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजन बिना भन्सार ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। तर ३२ इन्चभन्दा ठूलो टेलिभिजन ल्याए ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ।
विदेशमा काम गर्दा गरेकाहरूले नेपालमा आएर सोही काम अनुसारको विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नका लागी ल्याएका व्यवसायिक सामानमा पनि भन्सार नलाग्ने व्यवस्था छ। डाक्टरले ब्लड प्रेसर नाप्ने यन्त्र, स्टेथेस्कोप, खेलाडीले खेलकुद सम्बन्धी सामान फुटबल, भलिबल, संगीतमा लागेकाहरुले बाजाहरु, गितार, हार्मोनियम, तबला, लगायतका सामान १/१ वटा ल्याउनको लागी भन्सार तिर्नुपर्दैन।
साथै निश्चित परिमाणका लुगाफाटा, बिछ्यौना, घर गृहस्थीका लागी ल्याएका पुराना सामान साथै नीजि प्रयोगका सामान ल्याउन भन्सार लाग्दैन।
उपचार गर्न विदेश गएकाहरूले ल्याउने औषधि र शारीरिक अशक्तहरुले प्रयोग गर्ने समानमा पनि भन्सार छुट छ।